Mutambo wepuzzle Warp Shift, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Mutambo wepuzzle Warp Shift, yemahara kwenguva pfupi
Zvekare tinodzokera kumutoro kukuzivisa iwe nezvechikumbiro icho chinowanikwa kurodha mahara. Nhasi tiri kutaura nezve Warp Shift, mutambo wepuzzle uyo unoitika munyika isinganzwisisike. Mumutambo uyu, isu tichafanirwa kuisa njere dzedu pakuyedza patinogadzirisa matambudziko anounzwa nemutambo, matambudziko atinofanira kugadzirisa achiperekedzwa nerunyanzvi rwekurira. Warp Shift ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 2,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara. Kana moyo murefu usiri hunhu hunoratidzika mukati medu, tinogona kushandisa zve-mu-kutenga kutenga kugadzirisa mapuzzle nekukurumidza uye kuenda kune inotevera.
Munguva yemutambo isu tinofanirwa kutungamira iyo diki PI nemumwe wake kuburikidza neLabyrinthine inovhara yekamuri risinganzwisisike rekare iro ravakabatwa. Tiri munzira tichafanirwa kugadzirisa nharaunda dzakatikomberedza kuitira kuti Pi ikwanise kudzokera kumba pasina matambudziko. Warp Shift inoenderana neIOS 8 zvichienda mberi, saka haienderane ne iPhone 4, chishandiso chine yekupedzisira iOS vhezheni iwe yawakagamuchira yaive iOS 4,5. Ichi chishandiso chine avhareji chiyero che5 kubva paXNUMX nyeredzi uye zvirokwazvo inofadza vese avo vanoda mapuzzle.
Warp Shift Zvimiro
Inotorwa mutambo uyo unosimudzira zvese pfungwa uye pfungwa dzedu.
Maitiro eLabyrinthine kuburikidza nezvatinofanira kupfuura nekuita zvese zvinogoneka kuti tisazvione takazvivharira.
Kuti tigadzire nzira yedu, isu tinofanira zvishoma nezvishoma kugadzirisa nharaunda yedu.
Ongorora nyika nhanhatu dzinoshamisa pamwe nematanho gumi neshanu.
Iwo maitirwo ari nyore, nekuti isu tinongofanirwa kutsvedza munwe wedu pachiratidziro kufambisa hunhu uye kubata izvo zvingave zvekubatsira kukunda mazizi.
Warp Shift5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mutambo wepuzzle Warp Shift, yemahara kwenguva pfupi
Rolling iTunes kodhi: chakakwana chipo cheMadzimambo kune chero Apple mushandisi
Tim Cook anoti mune imwe hurukuro paNew York Stock Exchange kuti Airpods iri kubudirira